Tababarihii xulka qaranka Kenya oo iscasilay - BBC News Somali
20 Febraayo 2018
Image caption Paul Put previously coached Burkina Faso, taking them to the 2013 Africa Cup of Nations final.
Tababarahan 61 jirka ah, ayaa sheegay inuu isaga casilay jagadan arrimo shaqsi ah, oo isaga u gaar ah.
Xiriirka ayaa war uu soo saarey ku sheegay, in is casilaadda Paul Put ay ku tahay dhabarjab kooxda qaranka, iyadoo haatan uu socdo ololaha isreeb reebka loogu soo baxayo Koobka Qaramada Afrika ee sanadka 2019-ka.
Stanley Okumbi, kaasoo u ahaa kooxda Harambee Stars sanadkii 2016-kii kuxigeen, ayaa haatan jagada tababaranimada si ku meel gaar
Sidoo kale xiriirka ayaa ku dhawaaqay in ayba durbadiiba bilaabeen hannaanka ay kusoo xulayaan tababarihii badali lahaa Put.
Kenya ayaa haatan ku jirta heerka saddexaad qeybta F, ee loogu tartamayo soo bixitaanka koobka Qaramada Afrika ee 2019-ka, ka gadaal markii ay kusoo guul dareysteen ciyaar ay la yeesheen kooxda Sierra Leone 2-1 bishii June.
Waxaa lagu wadaa iney ku hardamaan magaalada Nairobi, kooxda hor kaceysa qeybta F ee Ghana bisha September ee soo socota.
Put - oo la saxiixday Kenya heshiis soconaya labo sano bishii November ee lasoo dhaafey, ayaa hore usoo layliyey kooxaha qaramada Gambia iyo Burkina Faso.
Intii lagu guda jirey laylintii uu tababare Put ee xulka qaranka Burkina Faso, ayey kooxdu waxey gaartey ciyaartii kama danbeysta, iyadoo ay ka guuleysatey markii danbe kooxdii ka socotey dalka Nigeria.